Axmed Teerso - Wikipedia
Colonel Ahmed haji Mohamud Osman (Ahmed Terso), احمد ترسو ]]
kuna soo wax bartay dalalka Egypt, rusia
saldhigiisa Qeybta 26 Hargeysa
Tuulada Raaxaale, Jalalaqsi
Colonel Ahmed haji Mohamud Osman (Ahmed Terso), احمد ترسو wuxuu ahaa ninkii xureeyey magaalada Godeey ee dalka Itoobiya taariikhda markey aheyd 1977.Waxuuna ku geeriyooday isla dagaal kaas 1977 kii. waxuuna ifka ugu tagay gabar iyo hal xaas.
Taariikh Nololeedkii Axmed Terso oo ka mid ah halyeyadii Somalia[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Gaashaanle-sare Axmed Xaaji Maxamuud oo loo yaqaano Axmed Teerso(ahmed terso) waxa uu ku dhashay jameecada Raaxaale oo ka tirsan degmada Jalalaqsi ee Gobalka Hiiraan sanadka marka uu ahaa 1935kii. Yaraantiisa waxa uu ku soo barbaaray Jameecada Raaxaale.
Halkaas oo uu ka bilaabay barashada Qur’anka Kariimka. Sanadka markuu ahaa 1950kii ayuu ka qalinjabiyay dugsiga qur’aanka isaagoo xafiday 114ka qur’aanka karimka ah.
ahmed terso waa nin aad u figrad dheer siiba xaga waxbarashada iyo milatariga, waa nin taxadar badan siiba xaga arimaha bulshada iyo dhamaan dhacdooyinka nolosha aduun.
Sanadkii 1956dii waxa uu u soo amababaxay Muqdisho halkaas oo waxbarashadiisa cilmiga Shareecada Islaamka iyo Tafsiirka qur’aanka ka bartay. Isaga oo waxbaashadiisa ku dhexjira ayuu bilaabay dugsiga sare ee Schoola desepline Islamic sanadka marka uu ahaa 1958dii, wuxuuna ka qalinjabiyay sanadka marka uu ahaa 1962dii kaddib markii uu ka qeybgalay imtixaan adkaa oo la dhexdhigay arday soomaaliyeed oo boqolaal gaareysay ayuu ku gudbay darajo aad u sareyso, waxaana loo qaatay Leyli sarkaal ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed.
waxa uu waxbarasho u aaday dalka Masar sanadkii 1962dii, isagoo wax ka baranayay kullaydii ciidmada ee Qaahira ayuu ku soo laabtay dalka 1965kii, wuxuuna u dalacay darada xidigle, waxaana loo badalay qeybta (26aad) ee Ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee
magaalada Hargeysa, isagoo loo magacaabay taliye horin ee ciidanka lugta.
1966dii wuxuu u dalacay labo xidigle, sanadka marka uu ahaa 1968dii ayaa loo soo badalay dugsiga tabarka ee Bootiko oo markii dambe loo bixiya Xalane si uu ugu qaato tabar abaanduulenimo. isla sanadka 1968dii waxa uu u dalacay dhamme waxaana loo badalay ururka taliska guud ee xoogga dalka soomaaliyeed, waxaana lagu magacaabay madaxa waaxda ee hoggaanka saadka ee xoogga dalka soomaaliyeed.
Markii wax barashada loogu diray midawga soviet[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
ahmed terzo Sanadka marka uu ahaa 1970kii waxaa waxbarasho loogu diray dalkii la oran jiray Midawgii soviet, gaar ahaan kulliyadda ciidmada ee dagaalka ee magaalada Moskow.
isagoo waxbarashadiisa ku dhexjiray sankada markuu ahaa 1972dii ayuu u dalacay Gaashaanle, afar sano kaddib markii uu soo dhameystay waxbarashadiisii u socotay 1970kii ayuu dib ugu soo laabtay dalka 1974, isagoo wata shahaadada cilmiga militariga ee sare, islamarkaana lagu maamuusay billad sharaf waxbarashadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan aawgeed.
Bartamahii sanadka 1974kii ayaa loo badalay qeybta (60aad) ee Baydhabo, waxaana lagu magacaabay taliye-gaaskii fadhigiisu ahaa magaalada Xudur ee gobalka Bakool, islamarkaasna waxa uu u dalacay Gaashaanle dhexe. Bishii july 1977kii isagoo hogaaminayay ciidan lixaad leh wuxuu ka qeybgalay Xoreyntii Somali-galbeed, isagsoo dagaalkaas ku noqday gaashaanle sare.
waqtigii uu shahiiday[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Gaashaanle sare axmed Teerso isagoo dagaalamaya ayuu ku shahiidey buundada Godeey taariikhda marka ee eheed 16 july 1977kii, isagoo lagu aasay isla goobta dagaalka uu ku geeriyooday.
Shahiidnimadiisa waxaa lagu maamuusay bilad dahab ah iyo darajada gaashaanle sare.
Gaashaanle sare axmed xaaji maxamuud cismaan cabdule wuxuu ahaa aqoonyahan bartay cilmiga militariga intaasna waxa u sii dheereeyd isagoo cilmiga shareecada islaamka yaqaanay ‘ luuqadaha uu ku hadli jiray gaar ahaan luuqadda carabiga ee uu uga baxay dugsiga sare iyo kulliyada ciidmada ee dalka masar ‘ sidoo kale tan ruushka uu ku soo qaatay tababarkiisii uggu weeynaa ee ciidan.
Axmed teerso dadkii ay wadashaqeeyeen soo dhexmartay dhammaan waxay ku ammaaneen wanaag badan iyo nin aad dadka u tixgeliya iyo wadaninimo weyn oo ku jirtay, wuxuuna madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare ku maamuusay taalo uu u dhisay axmed teerso.
Alle ha u naxariiste Axmed Teerso waxa uu ifka kaga tegay afadiisa Marwo Drs Caasho Cali Isla-weyn iyo hal gabar oo lagu magacaabo Evalin Axmed Teerso.
taariikhdaas oo kooban waxaan ka helnay gaashaanle sheekh ibraahim xaaji maxamed nuur oo deggan dalka mareykanka magaalada Minneapolis.
waxii taariikh ee dheeraad ah oo aad ka taqaano halyeyga axmed teerso ku soo dir E-mail. baashi2011@hotmail.com
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Axmed_Teerso&oldid=142293"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 12:52, 28 May 2015.